China Neoprene Beverage Holders fekitari uye vagadziri | SJJ
Neoprene Beverage Holders Iyo inozivikanwawo seinogona koozie, inogona kutonhorera, mubati wehombodo, Beer mubati. Yakagadzirwa ne3mm-5mm neoprene zvinhu. Chiedza chisina kuremerwa. Mudiki anogona mubati anogona kubata 12 OZ gaba rinogona Cola / doro / sprite kana zvimwe zvinwiwa. Kukura kukuru kwegirazi bhodhoro kana zvinwiwa zvepurasitiki. Mashoko acho T ...
Iyo inozivikanwawo seinogona koozie, inogona kutonhorera, mubati wehombodo, Beer mubati. Yakagadzirwa ne3mm-5mm neoprene zvinhu. Chiedza chisina kuremerwa. Mudiki anogona mubati anogona kubata 12 OZ gaba rinogona Cola / doro / sprite kana zvimwe zvinwiwa. Kukura kukuru kwegirazi bhodhoro kana zvinwiwa zvepurasitiki. Izvo zvinhu zvakakora zvakakwana kudzivirira kubva pamvura tembiricha shanduko nekukurumidza. Zvakanakisa kumakwikwi emitambo / kushandiswa kwemotokari / zviitiko zvekunze kana zvimwe zviitiko zvakasiyana zvekuunza zvinwiwa, kuchengetedza tembiricha yekunwa padyo usati waisa mukati mayo. Ipapo iwe unogona kuwana zvimwe zvakanaka zvinwiwa zvinwiwa. Uye haina kuvhunduka, iro girazi remubhodhoro regirazi haringavhunike nyore mushure mekuisa pane ino mubati. Rudzi urwu rwezvinhu runowachika, zviri nyore kuchenesa, risingapinde mvura, rinotambanuka uye rinogara.
Chinyorwa: 3-5mm ukobvu neoprene
Dhizaini: Iripo chimiro kana chimiro chakasarudzika, seT-shati.
Logo: Silkscreen anodhinda / kupisa kuchinjisa logo.
Zvakabatanidzwa: Chipurasitiki / simbi chirauro kana simbi yakatsemurwa mhete. Zvakare inogona kugadzira iyo yekuwedzera mubato. Ipapo zvinogona kuita kuti chinwiwa chiitwe nyore.
Zvadaro: Leather Keychains & Key Fobs
Ndarira Belt Simbi dzemabhande emabhurukwa
Aromatherapy Mota Diffuser Locket